SingForYou.net - Chit Pyone Hnin See
Chit Pyone Hnin See
Tags : နုတ်ခမ်းတော်ဆူလွန်းတယ်
By : SKB on Dec 1, 2009
Score: 95 Rating: 5.00 Comments: 44
Chit Pyone Hnin See's Description
ရွှေနုတ်ခမ်းတော်လေး စူနေလိုက်တာများဗျာ အားကြီးချစ်ဘို့ကောင်းတယ်နော့ သက်မွန်မြင့်ကိုပြောတာပါ ဟီးဟီး ကျွန်တော်ကောင်မလေးကတော့ လှဘူးလှဘူး ဒါပေမဲ့ ချစ်ဘို့တော့ကောင်းတယ် ကျွန်တော့်တစ်ယောက်တည်းအတွက်ပဲနော် ဟဲဟဲ ချစ်ဘို့ကောင်းတာကိုပြောတာပါ
nayhtut007 on Jun 13, 2010 0
A yan kaung lite tar like tal
amateur on Feb 15, 2010 0
တကယ်ကောင်းတယ်ဗျာ....ဘယ်ကို လွမ်းလို့လွမ်းမှန်း မသိဘူး ဖြစ်သွားတယ်..
moeluu on Dec 17, 2009 0
Nice classical!.. it's good to listen.. *& cheers!
SKB on Dec 17, 2009 0
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် moeluu ရေ အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
630 on Dec 17, 2009 0
ko skb yay i like this song you can sings nice 1....so...5 *****4 u....
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ အခုလို အာေးပးတဲ့ အတွက် အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
pp01 on Dec 2, 2009 0
Hoot pa..hoot pa.. yay lae yay.. so lae so..set hit htar mal.. SKB yay..KG lwon pa taw..kyite tal..kyite tal..:D*****
ဟီးဟီး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ အခု လို အစဉ်ဆက်မပြတ်အားပေးနေတဲ့ ပုရိတ်သတ်တွေကို ကျွန်တော် နောက်ပိုင်းမှာ အစီအစဉ်လေးတစ်ခုလုပ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ ဟီးဟီး လေးဖြူပြောသလို ပြောကြည့်တာပါ
brownlay on Dec 2, 2009 0
taw lite tar SKB yay.. kg pyan p kaw.. ********* tway htet yuu lite ownn
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အစ်မရေ အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
thant on Dec 2, 2009 0
song tine song tine........amyal kg ag so ng tal.........kaung ma lay photo ko kyie pye so tal htin tal...........**********
ဟီးဟီး ဟုတ်ပါဘူး အစ်မရာ သူနဲ့ က အ၇မ်းတူနေတာကိုး ဟီးဟီး ကျေးဇူးအစ်မရေ
sumaylay on Dec 2, 2009 0
bro SKB yay...su ya p ka htae ka ma so tot tar ku mha pal so tot tal htin tar pal....:P....comment pay mae thu ta yout pyout nay lo tha di htar mi tar...:D.....classical tha chin tway ko ...amyal paing2 ng2 so ng tae bro SKB atwat....always 5* par.....really nice one par.....
အဲလိုလည်း ဟုတ်ပါဘူး အဲဒီရက်က နည်းနည်း အလုပ်တွေများသွားလို့ပါ ကျေးဇူး နော်အခုလို အားပေးတဲ့အတွက် အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်
YinLiHoe on Dec 2, 2009 0
Way.. Kg Tel Loe Pyaw Tar ... Nae Nay Tel Hin Tel ... Arr G Kg Tel way.. Kg ma kg Way..... ******
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ အတိုင်းမသိလည်း ၀မ်းသာမိပါတယ်ခင်ဗျာ
whitekisslay on Dec 1, 2009 0
Ako SKB naw...be thu ko arrr kyii chit ?de song lay ko so tar lae listen lol kaung tal ako yae***************arrr payy nay mal naw!
ကျွန်တော့ကောင်မလေးကိုပဲ အားကြီးချစ်တာပါခင်ဗျာ ဟီးဟီး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
plan on Dec 1, 2009 0
seven on Dec 1, 2009 0
hoke lar? yone bu.....photo pya :))))))))))))))))) ...arr pay twar par tal bro yay..*****************
ပြမယ်ပြမယ် ကျွန်တော့်စီကိုအလည်လာခဲ့လေ ဟီးဟီး ဓါတ်ပုံတွေ က အများကြီးပဲမို့လို့အလည်ခေါ်ပြီးပြမှာကိုပြောတာနော် ဟီးဟီး ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
raindrops on Dec 1, 2009 0
^ v ^ ... mg lay Thar Ngal yay ...ayan kg tal hayyyyyyy ... ama ta khar hmar ma kyar bu kae pay mae ... love it from me ... thanks for singing naw ... ! ama nyi ma lay ma hla tae kyaung htae ma yay nae kwar ... thu myin yin bal sate kg hmar lae ... thu lae mg lay twat hla chin hmar pop ... hote bu lar ... sate hla yin pee tar bae kwar ... ama ka tha baw tu tal ... k ? ... TMM tha yote saung tar tway so par myar pee TMM lae swae ma nay nae oo hayyyyyyy ...***** from me mg lay yay ... All the Best ... ^ v ^
ဟီးဟီး သက်မွန်မြင့်နဲ့သူ က အရမ်းတူတာကိုး အစ်မရာ သူ့ ကို မတွေ့ ရရင် သက်မွန်မြင့်ကို ကြည့်တယ်လေ တူတူပဲ သူနဲ့ သက်မွန်မြင့်က ရုပ်တူတာနော် ကျန်တာတွေ တူသလား မတူသလားတော့ ကျွန်တော်လည်း မသိဘူး လေ သက်မွန်မြင့်နဲ့ ကျွန်တော်က ခင်မှမခင်တာ သူ့ စိတ်ဓါတ်ကိုတော့မသိဘူးလေ ဟီးဟီး
hansoe on Dec 1, 2009 0
ko SKB yay.. di tha chinn ko nar htaung pee. ngo taung ngo chin lar pi. fellapyit nae so htar loe htin tal... ayan kg par tal.... arr pay nay mal nor..
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ခံစားချက်ကတော့ သီချင်းဆိုတိုင်းထည့်ထည့်ပြီးဆိုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
paradise on Dec 1, 2009 0
ဒါပေါ. ဒါပေါ. ကိုယ့်ချစ်သူဆိုမှတော...ကိုချစ်ဖို. ကိုလှဖို.ပဲ လိုတာပေါ......အဲလိုချစ်သူမျိုးကို........နှုတ်ခမ်းစူတာ...စူပစေစူပစေ....ဟိဟိ... very nice bro yayyyyyyy*******:))))))))))
ဟုတ်လိုက်လေဗျာ ကိုယ်ထင်ရင်ကိုယ့်ကုတင်က ရွှေနန်းပဲဟုတ်ဘူးလား ဟီးဟီး
yellownavy on Dec 1, 2009 0
Ko SKB, this song reminds me of my younger years. My dad played this song day and night when we were kids... very very nice to listen... 5*
ဟုတ်လား ဟီးဟီးကောင်းတာပေါ့ဗျာ ကျွန်တော်က ဒီသီချင်းကို ကြားဘူးတာ မကြာသေးဘူး သီချင်းစာသားလေးကို ကြိုက်လို့ လိုက်ဆိုဖြစ်သွားတာပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
Phyogyi on Dec 1, 2009 0
bro..SKB..ရေ....လှတာမက်ရင်..ဘာကခက်တယ်ဆို တယ်ဆိုလား...မသိပါဘူးဗျာ....:))))))))))))))))))))) အဓိက..ကတော့ ...ကို့ကိုစာနာနားလည်မှုနဲ့ .ချစ်တဲ့ စိတ်လေး ရှိရင်ပဲ... အားလုံးက ပြီးပြည့်စုံနေပါပြီဗျာ... အဲလို ချစ်သူလေးနဲ့ ပဲ..ဆုံတွေနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်း ပေးရင်း.၅ စတား*****မှာ..voted သွားပါတယ်ဗျာ. .....အမြဲနားထောင်အားပေးလျက်..........................................................................ကို.ဖြိုးကြီး....
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုဖြိုးကြီးရေ အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုဖြိုးကြီးရေ
susannyunn on Dec 1, 2009 0
bro g yay...dsong lay ko vilion than lay nelz paung sat htar tot.. ta mo lay khan sar ya te... taw taw lay ko lsiten ya tarasin pyay hla par kyaung....khan sar nar sin arr pay thwar par kayung chint....bravo :clap :clap :clap...>>>>>
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ညီမလေးရေ အစ်ကိုလည်း တယောအသံလေးနဲ့ မို့လို့ ပိုပြီးကြိုက်ရပါတယ် ညီမလေးရေ
maureen on Dec 1, 2009 0
mite tal byo... bro yae so htar tarayan kg tal..********************* fo ru..
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ညီမလေးရေ အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
kabar on Dec 1, 2009 0
SKB on Dec 2, 2009 0
akhu lo arr pay tae atwat ayan kyay zu tin par tal khin byar
kounghtetsan on Dec 1, 2009 0
သူငယ်ချင်းရေ. ဘယ်လိုပြောရမလဲဗျာ.. တစ်ကယ်နားထောင်လို့.. ကောင်းတယ်ဗျာ.. ဒီလိုသီချင်းမျိုးက.. ရှားတယ်နော်.. တစ်ကယ်ရှားပါးတဲ့.. သီချင်းလေးကို ကောင်းမွန်စွာ.. ကြိုးစားပြီး.. သီဆိုထားတဲ့အတွက်.. 5************* ခင်မင်လျှက်.. ကောင်းထက်
bal lo mha m pyaw par nae tot byar :D hehedlo song tway pae so tat lozdlo song tway pae so nay tar par khin byar
achitsonethu on Dec 1, 2009 0
ဇာတ်သံနဲ့အကို၇ဲ့ ဘယ်နှယ့်နော် ကိုယ်ချစ်တဲ့သူကို့လှဘူးတဲ့ အဟီးး အရမ်းနားထောင်ကောင်းပါတယ် ဇာတ်သံနဲ့အကိုရေ
nyi ma lay chu: chu: yay kyay zu tin tal naw very thx
greenlay on Dec 1, 2009 0
သူငယ်ချင်းကြီးရေ ဒီသီချင်းလည်းကောင်းပြန်ပေါ့တစ်ခါ ***** ရွှေဖလားကြီးရတာ ဘာမှလည်းကျွေးဘူးလား ၊ကိုယ့် သူငယ်ချင်းကို အပြတ်အားပေးထားတာနော် :P :)
SKB on Dec 1, 2009 0
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အစ်မရေ ကျွေးမယ်လေ ဘာစားချင်လဲပြော ကြိုက်တာဝယ်ကျွေးမယ် ရုရှားစာဆိုရင် ပီဇာရှိတယ် ရှာဦးရမား လားကြိုက်တာပြော ၀ယ်ကျွေးမယ်
Feedback : 44
Feedback : 4
Subscribe to SKB